Izinto zangaphandle ezinhle: ukuthi ziyini, izici nezibonelo | Green Renewables
izinto zangaphandle ezinhle
IsiJalimane Portillo | 19/05/2022 12:00 | Imvelo
I-Las izinto zangaphandle ezinhle babhekisela emiphumeleni ehlukahlukene enenzuzo engahlobene nezindleko zokukhiqiza noma ukusetshenziswa kwemisebenzi emphakathini. Iqiniso liwukuthi zonke izenzo zethu emphakathini esiphila kuwo, kungakhathaliseki ukuthi zincane kangakanani noma zilula kangakanani ngokubona kwethu, zinemiphumela kwabanye abakuhlanganisayo. Ngamanye amazwi, lolu hlobo lwangaphandle lwenzeka lapho izenzo esizenzayo njengenkampani, njengomuntu oyedwa, noma njengomndeni ziba nemiphumela engathandeki ethokozisayo newusizo kukho konke okunye.
Kulesi sihloko sizogxila ekuchazeni ukuthi yiziphi izici zangaphandle ezinhle, izici zazo kanye nokusebenziseka kwazo.
1.1 izinto zangaphandle ezinhle
1.2 izinto zangaphandle ezingezinhle
2 Ungazilawula kanjani izinto zangaphandle ezingezinhle futhi uthuthukise okuhle?
3 Ukusetshenziswa kwangaphandle
izinto zangaphandle ezinhle yonke imiphumela emihle yemisebenzi yamalungu omphakathi, engacacile ezindlekweni noma ezinzuzweni zaleyo misebenzi. Incazelo yesimo esihle sangaphandle ayinqunyelwe kunoma yimuphi umkhakha noma isayensi, ihlanganisa yonke leyo miphumela emihle, emikhulu nemincane, izenzo zanoma yimuphi umuntu noma inkampani ezingaba nayo emphakathini wethu.
Sikhuluma ngezinto zangaphandle ezinhle ezingafakiwe ezindlekweni zokukhiqiza noma amanani okuthenga, kodwa lokho ingaba nemiphumela ezuzisa kakhulu emphakathini uwonke. Ukutshalwa kwezimali kwezibhedlela namalabhorethri ukuthola amakhambi ezifo ezithile kuyisibonelo salokhu. Ekuqaleni, ungase ucabange ukuthi lokhu kuzibophezela ku-R&D kungabiza kakhulu uma abacwaningi bengakwazi ukuthola ikhambi ngokushesha.
Iqiniso lisitshela okuphambene, ukuthi lolu hlobo lomsebenzi ludingeka kakhulu enhlalakahleni nempilo yabantu, ngoba ngokushesha noma kamuva kuzotholakala umuthi onciphisa imiphumela yesifo esihlobene. Lo muthi, othatha isikhashana ukuwuthola, uhlanganiswe nokutshalwa kwezimali okukhulu, izoba nengaphandle elihle kakhulu emphakathini ngokusindisa izinkulungwane zezimpilo, kodwa lokhu akubonakali ezindlekweni zokwenza uphenyo olude noluphakeme kangaka.
Ngokunjalo, miningi eminye imisebenzi engaveza izinto zangaphandle ezinhle emphakathini, nazo ezibalulekile ukuze usebenze kahle:
Tshala imali ekunakekeleni impahla yomphakathi (imigwaqo, izakhiwo, amapaki, izinkundla, izibhedlela).
imfundo (ukugcinwa kwezikole, othisha abaqeqeshiwe, ikharikhulamu eyanele).
Uphenyo Lwezokwelapha (imithi yokugoma, izidakamizwa, imithi emisha).
Ngokungafani nesimo sangaphandle esihle, isimo sangaphandle esingesihle siwumphumela wokwenza noma yimuphi umsebenzi obangela ukulimala emphakathini, okungashiwongo ngezindleko zayo. Nakuba sibhekene nemibono evela emkhakheni wezomnotho, le miqondo ingadluliselwa kunoma yimuphi umkhakha wempilo yansuku zonke.
Isibonelo esihle sesimo sangaphandle esingesihle ukungcoliswa kwemvelo, ikakhulukazi izimboni, yizinkampani ezinkulu. Cabanga ngenkampani enkulu yezimayini esebenza ngokumbiwa nokulungisa amalahle. Lapho bekala izindleko zokwenza umsebenzi othile, ababheki izinga eliphezulu lokungcola okuzobangela imvelo. Lokhu kuyabhekwa ingaphandle elibi futhi liwumphumela wenqubo yokukhiqiza yenkampani futhi akubonakali enanini lokuthengisa noma ezindlekweni zokukhiqiza amalahle.
Uma sima futhi sicabange, cishe zonke izenzo zinezinto zangaphandle ezingezinhle emphakathini. Isibonelo, ukusetshenziswa kukagwayi kunemiphumela emibi eyingozi empilweni yomsebenzisi, kodwa kudala izinto zangaphandle ezingezinhle njengokuncipha kwenani lengqalasizinda (uma umuntu ebhema egumbini, izindonga zingashintsha umbala futhi zilimale intuthu), futhi kungase kube nomthelela ongemuhle kumuntu othile. impilo (iziguli ezinesifuba somoya ezihogela intuthu kagwayi).
Ungazilawula kanjani izinto zangaphandle ezingezinhle futhi uthuthukise okuhle?
Uhulumeni unezinyathelo zokulawula nokunciphisa ukukhiqizwa kwezinto zangaphandle ezingezinhle, njengalezi:
Izintela ezinkampanini ezingcolisa kakhulu ukuze ukugqugquzela ukusetshenziswa kwamandla avuselelekayo kanye nezinqubo zokukhiqiza ezisimeme.
Lawula imisebenzi ethile (isibonelo, ukubhema, traffic emadolobheni amakhulu).
Izinhlelo zemfundo kanye nokuqwashisa umphakathi.
Ngakolunye uhlangothi, kukhona futhi izindlela ezithuthukisa futhi zandise izinto zangaphandle ezinhle ezikhiqizwa izinkampani nabantu:
Izibonelelo ezikhungweni zemfundo (ama-nursery, izikole, njll.).
Nikeza ngezimali zocwaningo nentuthuko, ikakhulukazi emkhakheni wesayensi nezokwelapha.
Ingaphandle, kungaba kuhle noma kubi, azikho kuphela emkhakheni wezomnotho womphakathi. Noma yiluphi uhlobo lokuziphatha, njengokubhema noma ukuphonsa ipulasitiki eceleni komgwaqo, kungaba nomthelela wesikhathi esifushane/eside emphakathini, okungaba kubi noma kube kuhle, kuye ngokuziphatha.
Ukuziphatha okuthile kwabathengi kungase kube nemithelela yangaphandle noma imithelela yesibili engacatshangwa enanini lomsebenzi. Ukusetshenziswa kwangaphandle kungaba kuhle noma kube kubi. Izindleko noma izinzuzo zokukhiqiza, ukusetshenziswa noma ukugaywa kabusha kufanele kucatshangelwe lapho kwakhiwa izinqubomgomo zomnotho oluhlaza.
Izinto zangaphandle zivela lapho amalungelo endawo kanye nokusetshenziswa kwemithombo yemvelo kunikeza izinzuzo eziyimfihlo kuphela ngaphandle kokucabangela imithelela engemihle noma emihle.
Ngokufingqa, wena ngokwakho ungathonywa okungcono noma okubi kakhulu ngaphandle kokuzibandakanya ekuthengeni noma ekuthengiseni umkhiqizo. Kunoma yikuphi, ukungenelela kulo msebenzi wezomnotho kuyadingeka ukuze kuthuthukiswe inhlalakahle yalabo abathintekile.
Ukuze zisebenze kahle, izintengo zemakethe kufanele zihambisane nezindleko noma izinzuzo zazo. Uma umkhiqizo omusha unokungaphandle okungekuhle okumbalwa kanye/noma izinto zangaphandle ezinhle kakhulu kunemikhiqizo evamile, kodwa ubiza kakhulu ukuwukhiqiza, kufanele ukhokhiswe intela ngokulinganayo. Izindleko zezezimali zomphakathi zizonxeshezelwa ngokunciphisa izindleko zomphakathi lungisa okwangaphandle okungakenzeki. Imikhiqizo izobe isiba nenani elilinganayo ngaphandle kokulahlekelwa inzuzo futhi abathengi bayokhuthazwa ukuba bathenge. Abakhiqizi bayawina, abathengi bayawina, futhi indawo ezungezile iyawina.
Ngalesi sizathu, kufanele sicabangele izinto zangaphandle zemvelo futhi sihlole imithelela eqondile nengaqondile yokukhiqiza endaweni ezungezile. Leli nani kufanele licatshangelwe uma kuqhathaniswa nemikhiqizo, ikakhulukazi uma ukuthengwa kungokwengxenye kahulumeni. Umkhiqizo oshibhe kakhulu awuhlali ushibhe kakhulu.
Isibonelo, amazwe akhipha isikhutha esiningi kufanele akhokhe izintela ezengeziwe. Yingakho uhulumeni kufanele ajezise izinkampani ezingcolisa. Futhi, lezi zinkampani zizodlulisela lezi zindleko enanini lokuthengisa. Ngenxa yalokhu, izinkampani eziluhlaza zithola ukuncintisana. Lezi zinqubomgomo zokukhuthaza ziklanyelwe ukunciphisa izinto zangaphandle ezingezinhle.
Ngithemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi mayelana nezinto zangaphandle ezinhle kanye nezici zazo.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuvuselelwa Okuhlaza » Imvelo » izinto zangaphandle ezinhle
Izinhlobo zikaphayini eSpain